Mara mma maa mma obodo gbara osimiri okirikiri nke Andalusia | Akụkọ Njem
Mara mma maa mma ala gbara osimiri okirikiri obodo nke Andalusia
Andalusia bụ obodo ndị ọzọ anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ ebe ị ga-eleta, site na obodo ruo maa mma obere obodo, na ọkachasị ụsọ oké osimiri ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ ihu igwe dị mma. Ọ bụ ya mere anyị ga-eji chọọ obodo ndị mara mma mara mma dị na Andalusia.
na obodo ndị dị n'ụsọ osimiri nke Andalusia Ha na-enye anyị ọtụtụ ọmarịcha oghere na, karịa ihe niile, nnukwu osimiri maka ịba mmiri. Offọdụ n'ime obodo ndị a dị n'ụsọ osimiri na-ewetara anyị foto ndị na-ahụkarị nke Andalusia, na n'ozuzu ha niile na-eme njem nlegharị anya, ebe ọ bụ na enweghị akụkụ ala a nke enyi na-amaghị.
Anyị na-amalite na obodo na-ewetara anyị a ahụkarị stampụ nke obodo ndị kachasị mma na Andalusia. Houseslọ ndị ọcha na-ekpuchi elu ugwu nke chere ihu n’oké osimiri na na nsọtụ Sierra de Cabrera. Ọ bụ ezigbo obodo mara mma, nke nwere ụlọ ọcha na-acha ọcha nke guzo kemgbe ọtụtụ narị afọ, nke hụkwara ọtụtụ obodo na-agafe, site na ndị Finishia gaa ndị Rom. Otu n'ime ihe a ga-eme n'obodo a bụ ịla n'iyi n'okporo ámá ndị dị warara, na-enwe ọ theụ nke ụlọ ndị dị iche na nke acha anụnụ anụnụ nke eluigwe na okooko osisi mara mma na mbara ihu. Isi iyi nke Mora bu otu n’ime ihe omuma ya, ebe enyere obodo ahu n’aka ndi ochichi ndi Katolik. I nwekwara ike ịga njem njem n'okporo ụzọ La Mena, na-ele osimiri anya.
Níjar bụ obere obodo, ọ bụ ezie na okwu ọchịchị sara mbara. Ọ bụ obodo ọzọ nke ụlọ ọcha dị n'akụkụ ụsọ oké osimiri, nke dị nso na ama Cabo de Gata ogige ntụrụndụ. Site na ebe a ị nwere ike ịga na Tabernas desert, ebe a na-ese ihe nkiri nkiri ndị na-egwu egwu n'oge gara aga. Obodo a na-enye ebe ndị njem nleta nwere oke osimiri mara mma dị nso, ọ bụ ezie na ọdịbendị ọdịnala dị ụkọ n'ihi eziokwu ahụ bụ na ọ bụ mpaghara nke ndị ohi na-apụnara ndị mmadụ ihe kemgbe ọtụtụ narị afọ. Otú ọ dị, akụkọ ihe mere eme nke ọgba aghara adịghị agụpụ ya ịbụ obodo mara mma nke na-enwe nnukwu njem nleta taa.
Nerja bụ obodo amaara na Spain maka ịbụ ebe a na-ese ọtụtụ ngosipụta nke usoro akụkọ ifo 'Verano azul'. Ọ bụrụ na anyị ga-eleta obodo ahụ, anyị nwekwara ike ịnụ ụtọ ịgagharị iji hụ ntọala ebe esere ihe nkiri ndị a. Na mgbakwunye, enwere oyiri nke nnukwu ụgbọ mmiri Chanquete. Ihe omuma ndi ozo banyere obodo a bu gaa na Balcony nke Europe, nke nwere oke ngosi nke oke osimiri. Cueva de Nerja bụ ihe ọzọ a ga-eleta, yana etiti obodo anyị nwere ike ịnụ ụtọ nri nri na ebe nchekwa dị iche iche.
Nke a bụ otu n'ime obodo ndị ahụ mara mma nke Andalus, nke nwere ụlọ ọcha mara mma nke nwere okooko osisi na efere seramiiki. Na ebe a ị nwere ike ịnụ ụtọ nnukwu echiche nke oke osimiri, yana nnukwu ụlọ dị na mpaghara elu nke obodo ahụ, site na nke enwere echiche dị egwu. Ọ bụ Orlọ ndị Moorish site na narị afọ nke iri n’elu oke okwute nke dị na Nasrid oge bụ ụlọ mkpọrọ ndị eze. N’akụkụ nnukwu ụlọ ahụ ka ụlọ ụka Virgen del Rosario dị, ọrụ Mudejar site na narị afọ nke XNUMX.
Tarifa bụ otu n'ime ebe ndị njem kacha mkpa na Andalusia, yabụ anyị nwere otu n'ime ebe ndị ị ga-eleta opekata mpe otu oge. Na mpaghara a bụ Bolonia na Valdevaqueros osimiri. Anyị ga-achọpụta na Tarifa bụ mecca nke egwuregwu mmiri, yana ọtụtụ narị kitesurfing kites na mbara igwe. Na mgbakwunye, anyị nwere ike ịme ọbịbịa ụfọdụ na-atọ ụtọ, dịka Gulọ Guzmán site na afọ 960 nke echekwara nke ọma. Nwee echiche dị ịtụnanya banyere Mirador del Estrecho, nke anyị nwere ike isi hụ oke osimiri Africa.
Estepona bụ obodo ndị ọzọ nwere amara na Andalusian na-enweghị atụ. Ebe iji nwayọ na-aga n'okporo ámá ya, na-ekpori ndụ n'akụkụ ọ bụla. Na Ifuru Square n’obodo ochie ya ọ na-ebi ndụ kwekọrọ n’aha ya, jiri okooko osisi ndị mara mma chọọ ya mma n’ụzọ kasị mma. Anyị nwekwara ike ịga leta ụfọdụ ihe ncheta na akụkụ ochie ya, dịka Castillo de San Luis. Enwere ike ịnụ ụtọ oge ehihie na-atọ ụtọ na Selwo Aventura, zoo, ma ọ bụ gaa na ụlọ ọrụ ndị na-agba ịnyịnya.
Na Conil de la Frontera ọ ga-ekwe omume ịnụ ụtọ gburugburu ebe dị jụụ nke dị nso na ebe ndị mara mma na ụsọ mmiri. Obodo ochie ahụ mara ezigbo mma, ya na ahụkarị ọcha ụlọ na n'ogige dị n'ime, nke ejiri ite eso juputara n’onwe ya. Thingsfọdụ ihe enwere ike ịme n'obodo a bụ, dịka ọmụmaatụ, nleta azụ azụ na ọdụ ụgbọ mmiri, wee detụ tuna si ọnyà ahụ. Gaa n'ahịa nri iji hụ ụdị ngwaahịa ha ma zụta ihe n'ụbọchị ahịa. Ikwesighi ịhapụ ụbọchị anwụ na-acha na osimiri Fontanilla na Cala de Aceite.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Mara mma maa mma ala gbara osimiri okirikiri obodo nke Andalusia
Ihe 5 mere ị ga-eji gaa Mali ịchọ njem